Ngwa Ngwá Ọrụ Kasị Ike Kasị Mma Dị ka Semalt
Nyocha ihuenyo, nke a makwaara dị ka ntanetị weebụ, ga-enyere gị aka ibudata ederede, ihe oyiyi na ụdị ọdịnaya dị iche iche site na saịtị dị iche iche. Ndị ọkachamara bụ ndị na-ede ihe omume ndị dị otú a ga-emeso ọtụtụ ndị ahịa si n'akụkụ nile nke ụwa, ọ bụ ya mere ha ji mepụta ngwaọrụ dị iche iche nke ntinye data iji nweta ihe kasị mma site nchịkọta data. Ọbụna ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ kachasị elu na nke a ma ama bụ ndị tụkwasịrị obi na ngwá ọrụ nhichapụ ihuenyo iji wepụ data bara uru site na net. Nke kachasị mma bụ na a pụrụ iji mmemme a kwa ụbọchị, kwa izu, ma ọ bụ kwa ọnwa n'enweghị nsogbu. N'iji ụfọdụ ntinye anya na ntinye ihuenyo ma ọ bụ ngwá ọrụ, ị nwere ike ịnweta data site na weebụsaịtị dị iche iche wee nye ya ndị ahịa gị n'ụdị ọ bụla. Ngwa ngwá ọrụ ndị a enwewo ọganihu ruo ọtụtụ afọ, ugbu a, ha nwere ike ijikwa ọtụtụ weebụsaịtị na oge. Iji ha mee ihe, ị nwere ike ijikwa ọtụtụ ọrụ ma wepụ ọtụtụ saịtị dịka ịchọrọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ichekwa data achọtara na API ma ọ bụ CSV formats.
Ngwaọrụ scraping ihuenyo nwere ike ịchekwa akwara gị na oge
Ngwaọrụ anọ na-ekpuchi ihuenyo ga-echekwa ma oge gị na ike ị na-emefu na ntinye data:
Ọ bụ ihe ọzọ dị ike na ịtụnanya nyocha ihuenyo. Ọ nwere ike ịchekwa data data ma hazie ya maka iji ọrụ ntanetị. Ị nwere ike ịwụnye bookmarklet Kimono Browser ngwa ngwa ma gbanwee data esighi na CSV ma ọ bụ JSON.
3. Ihuenyo ihuenyo
Nyocha ihuenyo bụ otu n'ime usoro usoro migration kacha mkpa. Ọ na-eme ka anyị nwee ike iji ngwa ngwa nke oge. Ọ dị mma ịsị na e nwere usoro dịgasị iche iche iji mepụta ma chekwaa data, ma ọ dịghị ihe dị mma karịa ngwa ncha ihuenyo. Nke kachasị mma bụ na ngwanrọ a na-arụ ọrụ na ihe nchọgharị weebụ niile, gụnyere Chrome, Firefox na Internet Explorer. Enwere ike jikọta ya na teknụzụ Flash na Silverlight, nakwa ngwa ngwa gị dịka Siebel, PeopleSoft, na SAP Source .